Football Khabar » पहिलो हाफमा १–१ को बराबरी : ग्रीजम्यान पेनाल्टीमा चुके !
पहिलो हाफमा १–१ को बराबरी : ग्रीजम्यान पेनाल्टीमा चुके !
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा अहिले बार्सिलोना र रियल बेटिसको खेल जारी छ । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउ रंगशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ १–१ को बराबरीमा सकिएको छ ।
निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बार्सिलोनाका लागि खेल सुरु भएको २२औं मिनेटमा फ्रेन्च विंगर उसामान डेम्बेलेले खतरनाक सटमा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । बक्स बाहिरबाट बल बक्स एरियामा प्रवेश गराएर उनले बेटिसका डिफेन्डरलाई छलाउँदै हानेको बुलेट सटले सोझै जाली चुमेको थियो । उनको प्रहार बेटिसका अनुभवी गोलकिपर ब्राभोले बचाउने कुनै मौका पाएनन् ।
पहिलो हाफको थप समयमा बेटिसका लागि एन्टोनियो सनाब्रियाले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेल १–१ बनाए । उनको कडा प्रहार बार्सिलोनाका गोलकिपले रोक्ने कुनै मौका नै पाएनन् । सनाब्रिया बार्सिलोनाकै पूर्वखेलाडी हुन् ।
यता, पहिलो हाफ बार्सिलोनाका एन्टोनी ग्रजिम्यानका लागि भने निकै खराब रह्यो । उनले एक पेनाल्टी मिस गरे । ३३औं मिनेटमा उनले हानेको पेनाल्टी प्रहार बेटिसका गोलकिपर ब्राभोले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए । त्यसअघि ग्रीजम्यानले तीन सुनौला अवसर खेर फालेका थिए । उनले तीन राम्रा अवसरमा तीनपटक नै पोस्ट बाहिर हानेका थिए ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७७, शनिबार २१:४६